သန့်စင်ငြိမ်းချမ်း| December 12, 2012 | Hits:1
| | လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းပေးရန် ဆန္ဒပြ တောင်းဆို သူများကို ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့က ပုသိမ်မြို့တွင် တွေ့ရစဉ်(ဓာတ်ပုံ – သန့်စင်ငြိမ်းချမ်း/ဧရာဝတီ)
အကြွေး ပြန်မဆပ်နိုင်သည့် မွေး/ရေ လုပ်ငန်းရှင်များကို အရေးယူရန် စီစဉ်နေမီဒီယာဥပဒေကို စာနယ်ဇင်းကောင်စီက လွှတ်တော်သို့ တိုက်ရိုက်တင်မည်လမ်းပြောင်းပြန်မောင်းပြီး ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ပြန်/ဆက် ဒုညွှန်မှူး အမှုဖွင့်ခံရရခိုင်တွင် ဥပဒေအရ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကြေညာနိုင်မနန်းဝိုးဖန် သေဆုံးမှု စသုံးလုံး တာဝန်ရှိသူများကို အရေးယူ
Sai Linyone December 12, 2012 - 10:52 pm Corruption of the government is the core issue of the current unrest in Burma. No one other than the government is responsible to solve it. As long as this serious corruption is tackled by the Thein Sein administration, Burma will face endless problems.